Hlola iCancun, eMexico - World Tourism Portal
Hlola iCancun, eMexico
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eCancun, eMexico.
Ongakwenza eCancun, Mexico.
Okumele kudliwe futhi kuphuzwe
Hlola i-Cancun kanye eduze kwayo ngamadolobha
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeCancun
Bukela ividiyo mayelana neCancun
Hlola i-Cancun okuyi idolobha elingasogwini endaweni ethandwa amaholide ebizwa ngokuthi yiMexico I-Caribbean, eyaziwa kabanzi njengesimo saseQuintana Roo, ku Mexico'- Yucatan peninsula.
Kunezincazelo ezimbili ezinokwenzeka zeCancun, ngokusho kolimi lwaseMayan; Ukuhumusha kokuqala "isidleke sezinyoka noma imbiza." Uhlobo lwesibili (futhi lwamukelwa kancane) "yindawo yenyoka yegolide".
Isizini Peak eCancun ivame ukusukela ngoDisemba kuya ku-Ephreli. Amanani kuyo yomibili imigwaqo yomoya kanye namahhotela akhuphuka kakhulu ngalezi zikhathi, ngenkathi ehla ehlobo nasekuqaleni kwentwasahlobo izinyanga.
Ukuphumula ekhoneni elisenyakatho-mpumalanga yeCaribbean yaseMexico, iCancun yakhiwa endaweni ekhethwe njengendawo enhle yokuthuthuka kwabavakashi nguhulumeni wamazwe waseMexico. Isimo seQuintana Roo sasesiyinsimu yobumbano futhi le ndawo yayinezakhamuzi ezimbalwa lapho ukwakhiwa kuqalile e1970. Yakhiwa ngamakhilomitha angama-21 wamabhishi amhlophe aqine njengamanani we- "7", ikhaya lezimanga zaseMayan, izinkanyezi zasolwandle, umhlaba omningi ongaphansi kwamanzi, nezinsizakusebenza zeholide ezisezingeni lomhlaba. Kusabhekwa njengasesangweni eliya eMayan World (El Mundo Maya). Amathempeli aseMayan nezindawo zesiko kukhona yonke indawo, ezinye zithwelwe ihlathi elivulekile, ezinye zitholakala kalula.
Indawo yehhotela yaseCancun cishe yakhelwe ngokuphelele embonini yezokuvakasha. Kuyavama ngamahhotela ahlanganisa yonke indawo. Hlala lapho uma unganakile ukuchitha iholide lakho nabanye abavakashi abaningi. Abavakashi abaningi ngokuyinhloko bavela eNyakatho Melika abakhuluma isiNgisi futhi kukhona nezivakashi eziningi ezivela eYurophu, kodwa izivakashi eziningi zibuye eCancun zivela kulo lonke elaseMexico.
IDowntown Cancun, ikakhulukazi uma usuka esiteshini sebhasi i-ADO namahostela aseduze namahhotela, kulapho iningi labantu lihlala khona. Kunezindawo zokudlela eziningi zonke ziindawo zokudlela ezinhle impela, futhi ezingabizi kakhulu kune-Hotel Zone, nomzala waseMexico), izindawo zokuthenga (iPlaza Las America, iPlaza la Isla eHotel Zone, ePlaza Outlet), ezimakethe (iMercado 28 y 23 ) namakilabhu asendaweni yedolobha ongavakashela lapho uhlala khona (Cocobongo, Dady'O, Palazzo, Mandala).
Labo abafuna kakhulu amabhishi nokutshontshelwa kwe-scuba, noma abanamandla amancane, bangathola kalula amakamelo emabhishi amahle futhi angenamuntu kangako ogwini ihora noma amabili nje eningizimu yeCancun. Amanye amakhono olimi lwaseSpain angasiza ekutholeni amadili angcono.
Labo abafuna isisekelo sokusebenza abafuna amahhotela amahle noma anethezekile nezinzuzo zempilo yasemadolobheni kodwa bakhetha ukunambitheka okuningana kwendawo bangafisa ukuhlala edolobheni laseMérida laseYucatan. Izindiza eziningi zamazwe omhlaba eCancun ziyaqhubeka ngemuva kokuma esikhumulweni sezindiza saseMérida esikhumulweni sezindiza.
Isimo sezulu eCancun sishisa kakhulu, sinesimo sezulu esishisayo esishisayo nesinomswakama unyaka wonke, futhi amazinga okushisa olwandle afudumele kakhulu.
Kuyinto elula ukusebenzisa ukuqasha imoto uma ufuna inkululeko ethe xaxa lapho uvakashela idolobha, noma izindawo eziningi eRiviera Maya.
I-Cancun kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Eningizimu kukhona isikhumulo sezindiza, enyakatho yidolobha futhi phakathi kokunwebeka komhlaba phakathi nolwandle kanye neNichupte lagoon wonke amahhotela, amabhishi nemigoqo, okubizwa ngokuthi yindawo yehhotela noma iZona Hotelera. IDowntown yilapho iningi labahlali lihlala khona futhi ifinyelela ezweni elikhulu ngemuva kwedamu.
I-Interactive Aquarium Of Cancun, Phakathi nendawo yehhotela, le aquarium encane kodwa yesimanje ikuvumela ukuba usondele futhi ube mathupha ngempilo yasemanzini. Ungalusa imisebe, oshaka, uthinte ama-starfish, njll. Futhi kukhona nethuba lokubhukuda namahlengethwa echibini elikhulu.
Amanzi nesihlabathi, iCancun kungenzeka ukuthi yaziwa kakhulu ngamanzi ayo amahle asolwandle namabhishi amhlophe ayimpuphu.
I-Isla Contoy, imayelana ne-30km (19 mi) enyakatho ye-Isla Mujeres futhi ngaphandle kobuhle bayo bemvelo kubhekwa njengendawo ebaluleke kakhulu yokwakha izidleke zezinyoni zolwandle eCaribbean yaseMexico ezinezinhlobo ezingaphezu kwe-150.
Kunemisebenzi eminingana ongayenza eCancun nakwezinye iRiviera Maya. Ungazithenga kumhlinzeki noma nge-ejensi. Iningi lama-ejensi linikezela ngenani elengeziwe ngentengo efanayo. Nalu uhlu lwemisebenzi edumile eCancun:
Ulwandle namabhishi. Okokubhukuda okuthuthukile kakhulu, onqenqemeni lolwandle oluvulekile kungenza kube nesipiliyoni sokubhukuda okuyinselele futhi kumnandi. Okokubhukuda okungathuthuki okuncane, noma labo abanezingane ezincane, khetha indawo yokubheka ebhekene ne-Isla Mujeres ukuthola okuhlangenwe nakho okumnandi nokuzilibazisa kwasolwandle. Qaphela ukuthi isiqhingi sishisa ngokweqile phakathi kwemini futhi bambalwa, uma kukhona amathuba okuphola. Isihlabathi esitholakala lapha sigcwala amakhorali futhi asishisi njengoba ungalindela. Amabhishi ahle impela futhi amanzi acwebezela futhi afudumele. Amabhishi amaningi eceleni kweKalkulkan boulevard eCancun asesidlangalaleni. Ngapha nje kwekulkulkan boulevard uzobona i- "Acceso publico a la playa" (ukufinyelela komphakathi olwandle). Ngaphansi kwazo uvame ukubona imithetho yalelo bhishi - amanye amabhishi awavumeli utshwala noma abathengisi, ngokwesibonelo. Amahhotela asemngceleni webhishi ngokuvamile ngeke akuvumele ukuthi usebenzise izikhungo zawo, noma ngabe uyalela endaweni yokudlela (uma bekuvumela lokho) bangakuvumela ukuthi usebenzise izindlu zokugeza. Uma ufuna ushintsho olusuka emabhishi ahlangane nomahhotela, iya ePlaya Delfines (Ibhishi laseDolphin), elinamakamelo wokushintsha nje futhi azikho izakhiwo zentengiso ezibonakalayo. Itholakala ngasekupheleni kweKalkulkan eKm 17.5.
Ukuchitha usuku emabhishi eCancun akuyona nje ithuba lokuphumula, kodwa nokuthenga. Abantu abaningi bomdabu baseCancun baziphilisa ngokuthengisa izinto ezahlukahlukene kubavakashi basolwandle. Kunezinto ezahlukahlukene ezizothengwa kusukela kubathengisi, izinto ezinjengama-sarong, ubucwebe, amagobolondo olwandle nokuningi. Kodwa-ke, njengasemakethe, kufanele uzimisele ukuvumelana ngamanani ukuze uthole amanani afanele.
UMuseo Maya de Cancun, Yisakhiwo esikhulu kunazo zonke esakhiwa yiNational Institute of Anthropology and History (INAH). Ngemuva kweminyaka engu-6 ekwenzeni kwabo bavule iminyango ngoNovemba 2012. Isakhiwo ngokwaso siyindawo yesimanje yokwakhiwa kwezakhiwo futhi muhle impela ukuhamba uzungeza ngaso. Kunombono omuhle wezindawo ezizungezile kusuka ezingeni eliphezulu. Isakhiwo sinomoya.
Chichen Itza kwakuyidolobha elikhulu langaphambi kweKolumbi okwakhiwa impucuko yaseMayan. Le ndawo yemivubukulo idume umhlaba wonke, ngenxa yephiramidi yaseKukulkan futhi yaqokwa yi-UNESCO njengenye ye- "New Seven Wonders of the World". Amanxiwa aseMayan aseChichen Itza angenye yezindawo okungafanele ungaphuthelwa kuzo lapho uhambela eCancun noma eRayaera Maya.
I-Parque de las Palapas, Lesi sikwele esisedolobheni sithathwa njengendawo enhle yokuhlangana iningi labahlali, ngakho-ke kuyinhliziyo yangempela yedolobha laseCancun. Kunesigaba esikhulu esibonakala kahle lapho imibukiso ijatshulelwa khona kalula. Amathunzi aphonswe izihlahla ezintsha zesundu ayimpumuzo emnandi evela elangeni elishayayo kanti kusihlwa isikwele esikhanyiselwe kahle sinomoya omnandi wothando. Inkantolo yokudla evulekile enezindawo zokuma ze14 itholakala enyakatho yepaki, kanti izinqola ezimbalwa zamapulangwe ezinezimbobo ezimboze ngazo zisatshalaliswa kulo lonke, ezisetshenziswa yizingcweti ukuthengisa imikhiqizo yazo.
UMUSA Museo Subacuatico de Arte, E2009 lesi sikhumbuzo sobuciko besimanje esingaphansi kwamanzi sakhiwa emanzini azungeze iCancun, i-Isla Mujeres nePunta Nizuc. IMnyuziyamu ihlose ukukhombisa ukusebenzisana phakathi kobuciko nesayensi yezemvelo futhi kuyingxenye yesakhiwo esiyinkimbinkimbi sasemanzini asolwandle ukwenza ikoloni futhi lihlale kuso ngenkathi kukhula izimbali eziningi ngezinga elikhulu. Zonke izithombe ezibekiwe zigxunyekwe olwandle futhi zenziwe ngezinto ezikhethekile ezisetshenziselwa ukuthuthukisa impilo yamakhorali. Ukufakwa okuphelele kuhlala endaweni engamamitha-skwele angaphezu kwe-420 yamatshe ayinyumba futhi inesisindo esingaphezu kwamathoni we-200.
Izimakethe, Letha amakhono akho axegayo futhi ulungele umuzwa omkhulu wokuthenga kunoma imiphi izimakethe zedolobha. Ukuthengwa okuhle kungatholakala, ngakho-ke anamathela ekuxazululeni kwentengo yakho.
I-Lobster Dinner Cruise. Thatha uhambo lokuya echibini elizolile esikebheni esihle nabangane ongakahlangani nabo kuze kube manje. Abasebenzi bayakuvumela ukuthi ubambe iqhaza ekuzijabuliseni noma ekuxazululeni emuva futhi ubuke ukushona kwelanga. I-Steak ne-lobster iphekwe esikebheni futhi inambitha eyengeziwe uma idliwa olwandle olwandle.
AmaJeep Adventures. Zizwa ezinye zezingxenye ezinhle kakhulu zeCancun kuhambo lokuzishayela le-jeep. Izintengo zokubuka zivame ukufaka umhlahlandlela onolwazi, nethuba lokubhukuda noma lokuhlwitha emihumeni engaphansi komhlaba, hlola amanxiwa aseMayan futhi uvakashele indawo yamahlathi.
Imisebenzi yamanzi nokuvakasha
I-Aquaworld Cancun. Ama-snorkeling, i-scuba diving kanye nohambo lokudoba, imisebenzi yamanzi, uhambo losuku nokuningi e-Cancun, Cozumel, Isla Mujeres nase Riviera Maya.
I-Cancun nendawo ezungezile inikezela ngamathuba amangalisayo wokuphuma ezindaweni zabavakashi futhi usondele emvelweni. Uthola imihume, imifula engaphansi kwamanzi, ihlathi le-pristine, ingadi yezitshalo, amapaki ezwe lonke eliseduzane nedolobha. Ubuye futhi ungene emhlabeni ngokweqile, kepha uma ungakaqinisekiswa, ungadonsa futhi esihlahleni sesibili esikhulu kunazo zonke emhlabeni, noma nge-Whale Shark, iManta Rays, ne-Sea Turtles noma ngamaqembu amakhulu eSailfish. Peninsula yeYucatan igcwele izimangaliso zemvelo; udinga nje ukwazi ukuthi ubheke kuphi.
Izinkampani eziningi zinikeza uhambo losuku olulodwa kepha udinga ukwazi, ukuthi ukubuka okulula kubukeka kalula, akunakuba lula ngokwendalo. Ezimweni eziningi inketho engcono kakhulu ukuqasha imoto uvakashele amapaki nezindawo wedwa (noma ngesiqondisi sendawo). Eminye imisebenzi, njenge-Whale Shark noma iSailfish ingahlelwa kuphela ngokusebenzisa ophethe onelayisense. Funa abahlinzeki abakhethekile be-Eco-Tour kukhona abambalwa kodwa abasaningi kakhulu eCancun.
Lapho uyothenga eCancun, ungaya edolobheni noma endaweni yehhotela. IDowntown ishibhile kakhulu.
Imakethe 28. Lokhu kuyimakethe yendawo yedolobha Cancun. Ukuthenga okuhle kwezikhumbuzo. Futhi inezindawo zokudlela ezinhle zangaphandle zaseMexico. Ukuthenga okushibhile kakhulu nokuhle. Ungakhohlwa ukuxoxa.
Imakethe 23. Lokhu kungaphezulu kwemakethe 'yasendaweni'. Ayinalo uhla olufanayo neMakethe 28, kodwa kufanelekile ukuvakashelwa.
I-La Isla Mall, indawo yehhotela ye-KM12.5. Izitolo ezinhle kakhulu endaweni yehhotela. Ukunikeza izindawo zokuphumula eziningi nezitolo zomklami kanye nezindawo eziningi zokudlela kanye nemigoqo. maphakathi kuya phezulu.
IPlaza Las America, Av. I-Tulum 260. IPlaza Las America ingesinye sezikhungo ezinkulu kakhulu zokuthenga eCancun maphakathi kuya phezulu.
ICancun ingenye yezindawo ezingokokuqala u-spa emhlabeni ezinokukhethwa kwama Resorts angaphezu kwama-30 e-Cancun Spa athembisa ukuhambisa ingqondo, umzimba nomoya wakho ku-nirvana of bliss pure. Ama-Spas eCancun anikela ngezindlela zokwelapha ezihlanganisa amasiko endabuko, amasiko asendulo okuphulukisa imayna, amasu anamuhla okunciphisa ukucindezela.
Zama okugeza kwendabuko kwendabuko yaseTemazcal noma ukugcotshwa komzimba ogcwele ogwini olubheke amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngena ekwelashweni kwe-thalassotherapy futhi uphumule njengoba ochwepheshe bezokwelapha behlinzeka ngemigoqo yemvelo eyenziwe ngezitshalo nezimbali zasendaweni.
Ukudla okushibhile kepha okuhle kakhulu, umuntu kufanele ahambe ngaphakathi kweCancun. Noma kunjalo kunezindawo zokudlela ezimbalwa ku-Hotel zone.
Ukuphila kobusuku kukaCancun akufani nenye indawo eya eMhlabeni. Kwabanye, usuku eCancun aluqali kuze kube yilapho imisebenzi efana nesidlo sasekuseni sasemini, ukuphathwa kosebhishi, bese kuthi ukulala kusihlwa kuqediwe. Lapha yindawo yakho yokukhanya.
Isikhathi sokuphuza esisemthethweni eMexico yi-18.
Ihhotela Zone liyindawo enkulu futhi ithola ukuzijabulisa okuphezulu nama-DJs. ungamangali ukubona i-Vegas efana nemibukiso iqhuma ngokuzenzakalela ngenkathi uthatha i-piña colada yakho. Lawa makilabhu angashaja izembozo ezinkulu, yize ikhava ingafaka ibha evulekile.
Ungase uzithole udansa emugqeni we-conga, uhleke izinkathazo zakho futhi ukhulume noma yini u-Español okwazile ukuyithatha. Isimangalo sesikhathi sokuqala, futhi ujabule ngaso sonke isikhathi ngababuyayo futhi.
Zama futhi amaklabhu e-Yaxchilan Avenue, atholakala edolobheni laseCancun, lapho bonke abantu bendawo behlangana khona.
Thenga amanzi asemabhodleleni futhi uwaphuze njalo ukuvikela ukuphuma komzimba noma ukuhlaselwa ukushisa.
Ngaphandle kwalokho, ungawaphuzi amanzi ngaphandle kokuthi ihhotela lakho linohlelo lokuhlanzwa kwamanzi. Iningi lezindawo zokungcebeleka eziseCancun lihlanze amanzi kuzo zonke izindawo ezisezindlini zokuphumula kubandakanya imigoqo kanye nezindawo zokudlela. Izindawo zokudlela ezisezingeni eliphakeme zivame ukuba namanzi ahlanzekile, kepha amanzi angaphandle kwalezi zindawo awaphephile ukuwaphuza.
Akukho lutho lwamahhala- isifundo esibaluleke kakhulu. Omunye uza kuwe athi, “ufuna isibhamu se-tequlia? Wozani kube mnandi! ”Lokhu kusho ukuthi awukaze uxoxisane ngentengo.
Musa ukusebenzisa ama-ATM angatholakali ebhange- Kukhona ama-ATM kulo lonke iCancun. Sebenzisa kuphela ezingaphakathi kwamabhange noma ehhotela lakho. Amakhemisi, izitolo, iziteshi zegesi kufanele kugwenywe. Uzoba yisisulu sokwebiwa kobunikazi (Kukhona ukuphepha kwe-24 hrs ngosuku endaweni yehhotela, kodwa awusoze wazi, umqondo ojwayelekile) noma uzothola izindleko ezinkulu zekhomishini yokuzisebenzisa.
IChichén Itzá Archaeological Site - indawo enkulukazi yemivubukulo yaseMaya eYucatan, eChichen Itza ivame ukuhanjelwa ohambweni losuku olusuka eCancun, kepha kude futhi kunengxenye encane yendawo nokuheha okungabonakala ngale ndlela. Uma uthola amaMaya asendulo anentshisekelo, chitha ubusuku kwelinye lamahhotela eChichen ukuze ugweme ukuvakasha okungaphelele. Ungathatha ibhasi lomphakathi noma imoto yangasese, cishe amahora angama-2.5 kusuka eCancun ngemoto. Futhi, eduze nendawo kukhona i-cenote, okuyi-sinkhole yamanzi entsha, lapho ungabhukuda khona. I-Kukulcán Pyramid, engenye yezakhiwo zamaMaya ezihlaba umxhwele futhi yavota enye ye-World's Wonder Wonder Yomhlaba, manje seyivalwe ukuba inyukele ukuze ingasindwa.
I-Tulum- Indawo okuyiyo kuphela indawo enkulu yemivubukulo yamaMaya ebuka uLwandle lweCaribbean yi-128km eningizimu yeCancun. Akukho neyodwa yamasayithi amakhulu amaMaya, kepha indawo yolwandle iyinika indawo enhle. Izinsizakalo zebhasi ezivela eCancun zihamba nge-2 hrs futhi zibiza i-MXN60. I-Tulum iqukethe izakhiwo ezihlukile ze-60 futhi kukholakala ukuthi yenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zemikhosi yabantu abangamaMaya. Le ndawo yokuvubukula eqala emuva kweminyaka engaphezulu kwe-7 ibonisa izinsalela zedolobha elikhulu elibiyelwe ngodonga elinemigwaqo, amakhaya namabhizinisi olwandle. Isici esikhulu sikaTulum ngu-El Castillo, okuyisiphiramidi esikhulu esihlala esofeni elingamamitha amane. U-El Castillo kucatshangwa ukuthi uyingxenye yochungechunge lwamalambu. Indlela yokwakha ifana neChichen Itza kepha ngesilinganiso esincane kakhulu; njengoChichen Itza, awuvunyelwe ukungena ngaphakathi noma ukukhwela phezu kwamaphiramidi.
U-Isla Mujeres - Ikhefu elihle kakhulu kusuka ezigibeni zezivakashi zaseCancun. Lesi siqhingi esincane simane nje sihamba ngemizuzu eyi-20 ngesikebhe ukusuka endaweni yehhotela noma ukusuka ePuerto Juárez Federal Dock, etholakala imizuzu eyi-5 ukusuka edolobheni laseCancun. Qasha isikuta ukuze uzungeze isiqhingi ngokushesha futhi kushibhile. Kunepaki enhle yemvelo yemvelo yepaki, iGarrafon, ene-vistas ebabazekayo emhlabeni kanye nomhlaba womlingo ongaphansi kwamanzi.
I-Cozumel - Isiqhingi esihle kakhulu futhi esihlala abantu kulo lonke elaseMexico, futhi siyindawo ebalulekile yokubiza iCaribbean. IChankanaab National Park itholakala lapha. Yaziwa kahle ngemisebenzi yayo ye-waterport efana nokudansa, ukuhlwitha, ukuhamba ngomkhumbi, ukuhamba ngesikebhe nokudoba.
I-Coba - Indawo enhle; lalingomunye wamadolobha amakhulu amaMaya ezikhathini zasendulo, kodwa okuningi kusekufihliwe ngaphansi kwehlathi elihle. Inombhoshongo omude kakhulu weNhlonhlo Yucatan, iNohoch Mul. UMuyil ugcoba ichibi elizungezwe ukwakhiwa kwamaMaya amaningi.
IValladolid idolobha elincane elisuka enkathini yamakoloni aseSpain enezikhathi eziningi zothando lwendawo, phakathi kweCancun neChichen Itza. Ukukhethwa kwamahhotela nezindawo zokudlela kwenza kube yisisekelo esihle sobusuku noma ezimbili; kuyinto enhle yokusondelana neChichen, namanye amanxiwa amaMaya amahle kakhulu e-Ek Balam angamaminithi we-15 ngasenyakatho nedolobha.
I-Xcaret. I-Xcaret yi-Eco-archaeological Park etholakala cishe nge-76km eningizimu yeCancun nangaphansi kwe7km eningizimu yePlaya del Carmen, eRiviera Maya. Lapha ungavuma izimbali ezishisayo nezilwane zasendle ezijwayelekile zesifunda kanye nezinkulumo ezihlukile zesiko lamaMayan. Ezikhungweni zayo ungathola isiza semivubukulo, sokuhlwitha imifula engaphansi komhlaba, ogwini, pavilion yamabhabhathane, okuluhlaza okotshani, ipulazi lokuzalela izifunda zesifunda, isigodi saseMayan, iJaguar Island, phakathi kwabanye. Ngezindleko ezengeziwe izivakashi zingabhukuda ngamahlengethwa; ujabulele izinsizakalo zeTemascal ne-Spa. Ebusuku ungavuma umbukiso wasebusuku oyingqayizivele we "Xcaret México Espectacular" oveza izinto ezahlukahlukene kusuka kusiko lakudala leMayan kuya emculweni nemidanso yendabuko yaseMexico. Ukuze uhlole ngokuphelele i-Cancun kuzothatha ilanga eliningi umuntu angaliphatha…
Amathikithi Ebhanoyi - Amahhotela - Ukuqashwa - Amatekisi - Iminyuziyamu kanye Nemisebenzi - Impahla yokuhamba - Amathikithi wesitimela - Izinsiza zokuhamba